Forum serasera malagasy Ny karazam-pivavahnamisy - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Ny karazam-pivavahnamisy
NADEGE - 23/12/2017 09:03
AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;
Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin’izao andro ankehitriny izao dia ny trano
fiangonana vita amin’ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy ihany angamba no mba
manadihady ny amin’ny antony sy ny fomba nahatonga azy io teo ;Izao fankalazana vanimpotoana
maningana eo amin’ny tantaran’ny fiangonana izao no famohazana ny lasa satria
adidin’izay mahalala no mampita izay fantany amin’ny taranaka mifandimby. Koa mihevitra àry ny
mpanoratra ity lahatsoratra ity fa tsara sy mety ny mampahalala ny rehetra fa matoa nisy ny
fiangonana teto Madagasikara dia noho ny ezaka nataon’ny vahiny anglisy izay fantatra amin’ny
anarana hoe « misionera ».
Tsy voambolana vaovao izy io ho an’ny efa ela nihetezana rehetra kanefa tsy mba teny henon’ny
taranaka ankehitriny intsony kosa satria efa lasa daholo ireo misionera. Tsy azo atao anefa ny
manadino fa miorina amin’ny lasa ny zava-drehetra ka izany no anton’ity famohazana azy eto ity
amin’ny teny fohy ihany.
Toerana falehan’ny tantsambo avy amin’ny firenena samihafa ny morontsirak’i Madagasikara ary
izy ireny dia notondroina tamin’ny anaran-tokana hoe vazaha. Raharaham-barotra isan-karazany
no nosahaniny teto fa tsy namela asa maharitra izy satria rehefa vita ny nataony dia lasa izy.
Taty amin’ny fiandohan’ny taon-jato faha-19 dia niova ny tantaran’i Madagasikara satria nifandray
ara-diplomatika tamin’ny fanjakana anglisy izay iray tamin’ireo firenena natanjaka indrindra erantany
ny mpanjaka Radama I ary nanao sonia fifanaraham-piaraha-miasa taminy. Tafiditra tao
anatin’izany fifanarahana izany ny fangatahany mba handefasana mpahay taozavatra hampianatra
asa vaovao an’ny vahoakany. Tsy nandà koa anefa izy ny hampianarana ny fivavahana kristiana
Rehefa vita ny fifampirahararahana dia tonga tokoa ireo vazaha anglisy avy amin’ny London
Missionary Society hanatanteraka io fanirian’ny mpanjaka Radama I io.
Fifanarahana politika teo amin’ny fanjakana roa tonta no nisy kanefa iraka avy amin’ny
fikambanam-pivavahana kristiana no nalefa .Ny anton’izay dia izao : ity London Missionary
Society,fantatra amin’ny fanafohezan-teny hoe L.M.S,ity ihany no fikambanana efa zatra naniraka
olona nankany amin’ny bolabolan-tany atsimon’izao tontolo izao, ka efa nanana ny fahaiza-manao
teo amin’izany andraikitra izany ,Izay no nahatonga ny fanjakana britanika nifanaraka taminy mba
handefasany ireo sokajin’olona notadiavin’ny mpanjaka Radama I ireo. Olona efa nahazo fiofanana
manokana na teo amin’ny ara-pahalalana, na teo amin’ny ara-tsaina ary indrindra teo amin’ny arapanahy
ireo olona faniraka tao amin’ny LMS ireo, ary izy ireo no fantatra tamin’ny anarana hoe
« misionera » rehefa nogasiana ny teny anglisy « missionary ».
stahtam - 26/12/2017 08:22
Rehefa hadihadiana ny antony nahatongavan'izy ireo teto (kabarin'i Léopold II mpanjakan'i belgique) sy ny zava-nisy taty aoriana (fandikana baiboly, fanjanahan-tany hatr@ ankehitriny) dia ho tsapan'izay (te-)hahatakatra fa hendry i Ranavalona I nandroaka azy ireny.
endriny - 22/01/2018 14:15
Ny fivavahana dia fandemen-Tsaina mahomby noho ny lefona.
endriny - 26/01/2018 15:30
Hoy ilay mpitondra tao Kenya fahiny nantsoina hoe Kenyatta: “nomeny baiboly aho, nasainy mivavaka. Nakipiko ny masoko. Fa nony tapitra ny vavaka, ka nahitro ny masoko; dia efa lasany ny taniko manontolo”
Miharena - 01/02/2018 18:08
Raha ny tantara no hadihadiana dia ny famerenana ny fomba gasy taloha no tena nandroahan'i Ranavalona I ny Kristianina teto.
Raha ny momba an'i Madagasikara indray hoe fandemen-tsaina izy io dia diso ihany satria tsy ny anglisy aloha no nanjanaka ny Malagasy fa ny Frantsay. Zavatra hafa mihitsy izany no antony nandefasana misionera dia ny mba hampahazava ny Malagasy.
Ny fidiran'ny Katolika nentin'ny Frantsay no mety miharoharo politika satria efa hanjanaka tokoa ny Frantsay.
Raha nisy fanoherana ny fidiran'ny Frantsay dia izay no tena atao hoe ady ho an'ny tanindrazana fa ny an-dRanavalona moa avy hatrany dia tonga taloha be vao niditra ny LMS.
gasy1zay - 01/02/2018 21:16
Mety sarotra be hoan'ny Mpanjaka t@ zany ny maheno hoe tsy misy intsony ny andevo, andriana sns... fa mitovy daoly zay mino an'Andriamanitra.
rhaj0 - 01/02/2018 23:44
Ka mety hoe tsotrabe ireo Mpanjaka fahiny, TSY mbola mahay ny fikafika. Fa raha festy zareo, dia afaka nahodiny, toa ny fataon'ny Mpanjaka fotsy rehetra ihany, hoe, izao Andmtnra izao mihintsy no nametraka azy ho Mpanjaka eee... toa ny resaka tatsy @ ilany ihany hoe, "sahaza" ary mendrika ho azy, ary nafoin'Andrtmntra ho azy, ny maha-Mpanjaka azy ao io.
Miharena - 20/02/2018 05:45
Ny mpanjaka dia Andriamanitra no mametraka azy na io ratsy fanahy na io tsara fanahy aloha.
Misy antony avokoa ny zava-drehetra matoa ataon'Andriamanitra.
Ary mendrika ho Mpanjaka Jesoa satria efa fantatr'Andriamanitra fa IZY no tsy niova fa nitoetra hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao.
Fal ilay iray kosa efa ninia ny hanohitra ka dia nazera tsy ho ao an-danitra intsony.
Ka asa aloha hoe iza amin'ireo no mba arahan-dRhaj0?